प्रचण्डको राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो उचाई – Karnalisandesh
प्रचण्डको राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो उचाई
प्रकाशित मितिः ५ मंसिर २०७६, बिहीबार ०८:०६ November 21, 2019
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय बैककले नेतृत्वको कार्यविभाजन गरेको छ। उक्त बैठकमा प्रतिनिधि सभाको पाँच वर्षे कार्यकाल अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चलाउने र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी सञ्चालन गर्ने सहमति भएको हो।
प्रचण्ड नेकपाको शक्तिशाली अध्यक्ष बन्न सफल भएका छन्। नेपाली राजनीतिक परिवर्तनको दौरानमा निर्णायक भूमिका खेल्दै आएका प्रचण्ड नेकपाको कार्यकारी अध्यक्ष बनेसँगै उनको यो राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो उचाई हो।
२०२६ सालदेखि राजनीति सुरू गरेका प्रचण्डले अनेकौं बाधा, व्यवधान र आरोवअवरोहलाई छिचोल्दै नेकपाको शक्तिशाली अध्यक्ष बनेका हुन्। वर्गीय मुक्तिको लागि २००६ सालमा स्थापना भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले अबलम्वन गरेका राजनीतिक एजेण्डाहरूलाई पूरा गर्ने स्थानमा प्रचण्डको आगमन भएको छ।
‘ठिक ढंगले समस्याको पहिचान गर्नु र ठिक ढंगबाटै समाधान गरिनु नै विचार हो।’ नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनले उठाउने विषय जनपक्षिय भएता पनि समाधानमा कतै न कतै चुकेको देखिन्छ। प्रचण्डले वर्गसंघर्षको मैदानदेखि संसदीय मोर्चासम्म आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरिरहेका छन्। उनी २०५२ सालदेखि आजका दिनसम्म नेपाली राजनीतिक क्षेत्रका सबैभन्दा चर्चित पात्र हुन्।
को हुन् प्रचण्ड ?
समृद्ध नेपाल तथा नेपाली समाजको अग्रगामी रुपान्तरणका लागि निरन्तर सक्रिय र निर्णायक भूमिकामा रहँदै आएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष प्रचण्डको जन्म विस २०११ मंसिर २६ गते कास्की जिल्लाको ढिकुरपोखरी गाविस वडा नं. २ लेवाडेमा भएको हो। पिता मुक्तिराम र माता भवानीका जेठो छोरा प्रचण्डले प्रारम्भिक शिक्षा कास्कीको ढिकुर पोखरीमा लिएका थिए।
प्रचण्डको परिवार चितवन बसाई सरेपछि विस २०२६ सालमा चितवनको नारायणी विद्या मन्दिर मावि. शिवनगरबाट उनले एस.एल.सी. उत्तीर्ण गरेका थिए। विद्यार्थी कालमा नै राजनीतिकरुपमा सक्रिय भएका प्रचण्डले २०२७ जेठ २९ मा पाटन बहुमुखी क्याम्पसबाट आई.एस.सी. पूरा गरे भने २०३१–२०३३ सालमा रामपुर कृषि क्याम्पसबाट कृषिमा बिएस्सी उत्तीर्ण गरे। पछि उनले जनप्रशासनमा स्नातकोत्तरको पढाईं गरे।
कक्षा १० मा अध्ययनरत हुँदा छविलाल दाहाल नाम परिवर्तन गरी पुष्पकमल दाहाल चौथो महाधिवेशनको राजनीतिमा सक्रिय भएपछि भूमिगत भएका थिए। भूमिगत काल २०३८ देखि २०६३ सम्म भूमिगत अवस्थामा उनको कल्याण, विश्वास, निर्माण र प्रचण्ड नाम रहेको थियो। चालिसको दशकमा माओवादी राजनैतिक समूहको प्रभावशाली नेताको रुपमा देखा परेसँगै प्रचण्ड नै उनको प्रचलित नाम रहेको छ ।
२०१९ सालमा ढिकुरपोखरी–२ बाट चितवन भरतपुरको शिवनगर गाविसमा बसाइ सराई भएका प्रचण्डको २०२६ साल बैशाखमा सीता पौडेलससँग विवाह भएको थियो। २०२८ सालमा नेकपाको पुष्पलाल समूहमा पार्टीको सदस्यताबाट आफ्नो राजनैतिक जीवन प्रारम्भ गरेका प्रचण्डले बादल, मित्र दवाडी, खेम भण्डारी र पुष्प भुर्तेलससँग मिलेर २०३१ सालमा मार्क्सवादी अध्ययन समूह गठन गरेका थिए।
उनी २०३४ सालमा चौथो महाधिवेशनमा प्रवेश गरी २०३५ सालमा पूर्णकालिन कार्यकर्ता र २०३६ सालमा चितवन जिल्ला समिति सदस्यमा निर्वा्चित भएका थिए। २०३८ सालमा क्षेत्रीय व्यूरो सदस्य एवं अखिल नेपाल युवक संघको केन्द्रीय समितिको महा–सचिव भई २०४० मा संघको केन्द्रीय अध्यक्षमा निर्वाचित भए, प्रचण्ड।
विसं २०४१ मा नेकपा (मशाल)को पाँचौ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित, २०४२ मा पोलिटब्युरो सदस्य, २०४६ मा महामन्त्री र २०४८ सालमा नेकपा (एकता केन्द्र) को महामन्त्री भए। यसैगरी, २०५१ सालमा तत्कालीन नेकपा–एकता केन्द्रको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन पछिको बसेको तेस्रो विस्तारित बैठकपछि पार्टीको नाम फेरेर नेकपा (माओवादी) राखेपछि महामन्त्री बनेका प्रचण्डले २०५२ सालदेखि सुरू भएको जनयुद्धको नेतृत्व गरे। २०५७ सालमा दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट नेकपा माओवादीको अध्यक्ष भए।
विस २०५८ माजनमुक्ति सेना नेपालको सर्वोच्च कमान्डर रहेका प्रचण्ड २०६३ साल असार २ गते बालुवाटारमा पत्रकार सम्मेलन गरी काठमाडौंमा भूमिगत जीवनबाट सार्वजनिक भएका थिए। २०६५ साल साउनमा गणतन्त्र नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्रीमा निर्वा्िचत भएका थिए। २०६९ सालमा वृहत्तर लुम्बिनी विकास निर्देशक समितिको अध्यक्ष बने। २०६९ सालमा हेटौंडामा सम्पन्न राष्ट्रिय सम्मेलनबाट अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भए। २०७० सालमा विराटनगरमा सम्पन्न एकताको महाधिवेशनबाट पुनःअध्यक्ष पदमा निर्वाचित भए। साथै उनीउच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको संयोजकको भूमिकासमेत निर्वाह गरिसकेका छन्।
अध्यक्ष प्रचण्डका नेपाली क्रान्तिका समस्या भाग १, २ र ३, सांस्कृति, कला र सौन्र्दर्य चिन्तन, प्रचण्डका छानिएका रचनाहरु (खण्ड १ र २) तथा प्रचण्डका छानिएका सैन्य रचनाहरुलगायतका पुस्तक प्रकाशित छन्। उनी २०६४ सालमा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनमा काठमाडाैँ १० र रोल्पा २ बाट निर्वाचित भएका थिए। त्यस्तै २०७० मंसिरमा सम्पन्न दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा काठमाडौँ १० मा पराजित भएका थिए भने सिराहा ५ बाट निर्वाचित भएका थिए।
‘प्रचण्ड’ २०७३ साउन १९ गते व्यवस्थापिका–संसदमा तीन सय ६३ सदस्यको बहुमत प्राप्त गरी नेपाल सरकारको ३९औं प्रधानमन्त्रीमा द्रोस्रो पटक निर्वाचित भएका थिए। २०७४ मंसिर २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नं. ३ बाट अध्यक्ष प्रचण्डले ४८ हजार दुई सय ७६ मत प्राप्त गरी प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित बनेका थिए।